Sida doorasho qiimo-daray adeegyada Assembly noo ah, waxaan ku siin Check File PCB Free, sidoo kale loo yaqaan Free DFM, kuwaas oo aan ku caawin hubiyo file design guddiga circuit caadadii arrimaha suurto gal ah in saamayn ku yeelan kara manufacturability. Haddii wixii arrimo ah ayaa la ogaado, waxaan ka heli lahaa soo xiriir si deg deg ah ay si wadajir ah u xaliyaan arrinta, ka dibna balan-soo-saarka PCB waafaqsan.
DFM waxaa lagu qaban doonaa laga bilaabo 5 dhinacyo: Checks gaardi, Signal iyo Checks Lakabka Mixed, Checks Power / Ground, Checks maaskaro Alxan, Checks Silkscreen. Read iyada oo cutubyada soo socda wixii macluumaad dheeraad ah.
1. Checks gaardi
The tallaabo Checks gaardi waxaa loogu tala galay si aad u hesho cilladaha manufacturability ka iman karta layers layliga (iyada oo loo marayo, lagu aasay iyo Indho via layers) iyo dhalin tirakoobka layers layliga. Waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan oo kaliya on layers layliga. Waxa uu isticmaalaa lakabka daloolin, hogaanka iyo layers hoose ee xidhmooyin layliga iyo wax kasta oo awood ama dhulka lakabka in raso ka. hubinta ugu weyn ayaa soo bandhigay Shaxda soo socota 1.
2. Signal iyo Checks Lakabka Mixed
function waxaa loogu tala galay si aad u hesho cilladaha manufacturability ka iman karta layers Signal iyo layers isku qasan iyo dhalin tirakoobka. tallaabada shaqeyn karaan on lakabka kasta, laakiin waxaa inta badan loogu talo galay layers signal. Waxa uu isticmaalaa lakabka laftiisa iyo NC kasta (layliga ama wadada) lakabka oo ka mudaa. hubinta ugu weyn ayaa soo bandhigay Shaxda soo socda 2.
Checks 3. Power / Ground
The Checks Power / Ground waxaa loogu talo galay in la helo cilladaha manufacturability ka iman karta awood, dhulka iyo layers isku qasan. Waxa uu isticmaalaa algorithms kala duwan si loo baadho layers xoog iyo dhulka negative iyo positive. hubinta ugu weyn ayaa soo bandhigay Shaxda soo socota 3.
function waxaa loogu tala galay si aad u hesho cilladaha saarka ka iman karta layers silkscreen iyo dhalin tirakoobka. jeeg wuxuu ku shaqeeyaa oo keliya on layers screen Xariir sababtoo ah waxa ay ku tiirsan furta shaqada si aad u hesho copper dibadda, maaskaro Alxan iyo layliga layers la xiriira dhanka ah taas oo si loo hubiyo. hubinta ugu weyn ayaa soo bandhigay Shaxda soo socota 5.
Doonayaa inaan ka faaidaysano doorasho Free DFM? Bilow ka diraya codsi xigasho mashruuc aad caadadii PCB Assembly in wonderful@wonderfulpcb.com Hubi in aad ka mid ah aad file design PCB, BOM iyo shuruudaha kale oo gaar ah. Wakiilada Our wuxuu hubin doonaa file iyo siin oraah caado 1-2 maalmood oo shaqo gudahood.